Qubanaha » Faallo: Maxaa Runta loo Qarinayaa ?..
Faallo: Maxaa Runta loo Qarinayaa ?..
Daacad la’aanta bulshada dhexdeeda ku baahday iyo sida had iyo jeer bulsha weynta Soomaliyeed qola weliba ay dantooda uga fiirsato.
Ayaandarada ina haysata iyo dhibka oo dhan innagaa isugu wacan Doorasha ayaa dhacdey ayaa la leeyahay wixii Khalad lagalay ee musuq maasuq ahaa iyadoo la saxin ayaa waxaa xoog lagu sharciyeeyey dhabaan khaladkii jiray.
Dadkii wax tirsanayey hadii la xaqiray sidee lagu heshiin karaa sow maaha in dhibaatadii wali jirto oo ay Caqabadku tahay in la helo Dawlad wanaagsen
ma oran karnaa hadii aan heshiin laheyn ummado kale ayaa nagu dhex jirata sida wadamada Dariska itoobiya iyo kenya
Hala iska daayo Cidna inaguma dhex jirtee inagaa isku dhex jirna, oo is Xaqirayna. Waad wada og tihiin Dulmiga lagu sameeyey shaqsiyaad baden oo si xaq ah u heli lahaa inay xildhibaan Noqdaan.
Wadanka soomaaliya la yiraah wali afduub ayaalagu hayaa Doorashadii. Ugu dambeeyntii waxaan ku soo koobilahaa Bulshada Somaalida waxaa la gudboon. inaaney si Fudud u Rumeeyaan Riwaayada beenta ah ee ka socota Doorashada Dadban.
Sidaa lawada socoteen Waxaa la soo gabagabeeyay Doorashada Guddoonka Baarlamaan cusub ee 10­aad oo ay ku soo baxeen saddex mas’uul oo aan cusbneyn.
Sadexdan mudane waxay qeyb ka yihiin Kooxaha isku haysta awooda hogaanka Doorashada Dadban arinkaa bulshada inteeda baden way og yihiin Aniga waxay ilahay oo Fadadeyda ku cadeynayaa in aan lagu Farxidoon waxaa ka soo baxa Afduubka Doorashada Dadban inta aan la sixin Khaladkii la galay.oo dhan.